I-AfricArXiv ithola i-JROST Rapid Response Award - AfricArXiv
I-AfricArXiv ithola i-JROST Rapid Response Award
Kushicilelwe ngu I-AfricArXiv on I-17th NgoDisemba 2020 I-17th NgoDisemba 2020
Ngemuva kokubamba iqhaza kwethu engqungqutheleni ye-JROST 2020, kuyasijabulisa ukuthi siphiwe ukuthi sanikezwa u- $ 5,000 ngokuzinikela kwethu ekuthuthukiseni ukuvuleka kwezocwaningo kanye nokufunda e-Afrika yonkana. I-AfricArXiv iphakathi kwabaklonyelisiwe abayisishiyagalombili besikhwama sokuphendula; kanye I-La Referencia - I-Openscapes - Ukubuka kabusha - sktime - 2i2c - Ezabantu Ezivamile - Ulwazi Equity Lab.
Kuyasijabulisa ukuba phakathi kwalabo abathola lesi sikhwama i-JROST. I-AfricArXiv, i-African Open Access kanye ne-preprint portal, yethulwe ngoJuni 2018 futhi kusukela ngaleso sikhathi ibisetshenziswa futhi yagcinwa ngeminikelo yomusa ngamalungu eqembu azinikele, ozakwethu nabangane. Lo mklomelo uzoqinisa umsebenzi wethu womphakathi wokuxhasa izifundiswa zase-Afrika ekwenzeni impumelelo yabo kanye nemiphumela yabo itholakale nge-Open Access nangokunikezwa amalayisense afanele. Manje sesingakwazi ukukhokhela ezinye zezindleko zethu, siqalise ukuqaliswa kwemephu yethu yomgwaqo, futhi silungiselele ukwakhiwa kwemali okulandelayo nokwakha ubambiswano lwamasu ohlelweni lwezemvelo lwe-African SciComm.
kusho uJohannsen Obanda, iMenenja yoMphakathi e-AfricArXiv
[Ukusuka IOI iwebhusayithi]
The JROST Rapid Response Fund yasungulwa ukwakha izindlela zokubuyisa ingqalasizinda evulekile nomphakathi wezobuchwepheshe. Imiklomelo isukela ku- $ 5,000 iye ku- $ 10,000 USD, futhi yenzelwe imisebenzi edingekayo futhi engeke yenzeke, noma engaba sengozini, ngaphandle kwayo.
Isikhwama sokuqala salo nyaka senziwe saba khona ngenxa yokupha kwe IChan Zuckerberg Initiative, I-Crossref, ITHAKA, I-hypothesis, Futhi Tshala imali kwingqalasizinda evulekile. Sibonga nabo bonke abaxhasi bethu, kanye nekomidi lama-JROST Awards nekomidi lohlelo ngokuseseka kwabo.
Joyina nathi ukuze sinikele emsebenzini wethu nge- opencollective.com/africarxiv; funda kabanzi ku- africarxiv.org/contribute/
Mayelana nokutshala imali kwingqalasizinda evulekile
Tshala imali kwingqalasizinda evulekile (IOI) isinyathelo esizinikele ekwenzeni ngcono ukuxhaswa kwezimali kanye nokuhlinzekwa kobuchwepheshe obuvulekile nezinhlelo ezisekela ucwaningo kanye nezifundo. Lokhu sikwenza ngokukhanyisa izinselelo, senze ucwaningo, futhi sisebenzisane nabenzi bezinqumo ukwenza ushintsho.
Imephu Ehlanganyelwe Yamathuluzi Esayensi Evulekile (I-JROST) uhlelo lomphakathi lwe-IOI olusebenza kumephu womgwaqo ohlangene wamathuluzi wesayensi avulekile.
Tags: AwardUJROSTvula isayensischolarship